कलंकीमा डेरावाललाई संक्रमण, घरबेटी भन्छन्ः... :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
कलंकी डेरा गरी बस्ने एक दम्पत्ति वैशाख २९ गते नवलपरासीबाट काठमाडौं आए। डेरा आएपछि उनीहरूले घरबेटीलाई भने, 'काठमाडौंमा मात्रै अनावश्यक त्रास रहेछ।'
'उनीहरू आफैं सचेत छन्,' सोचर शिक्षण पेसा अपनाउने घरबेटीले त्यति चासो दिएनन्। तर कोरोना त्रासबीच उनको मनमा शंका परिरह्यो। मन विचलित भइरहेपछि केही दिनअघि उनले ती दम्पत्तिलाई गएर परीक्षण गराउन भने।
'उहाँहरू आफैं सचेत मान्छे। जचाउनु हुन्छ होला भन्ठानेँ। केही नभएपछि मैले ४ गते आफैं गएर जाँच्नु न भनेँ,' घरबेटीले सेतोपाटीसँग फोन वार्ता गर्दै भने, '६ गते साँझ आएको रिपोर्टमा बहिनीलाई पोजेटिभ देखियो। उहाँलाई त्यही रात बलम्बु आइसोलेसनमा पठायौं। त्यति बेलासम्म हामी ८ दिन एउटै घरमा बसेका थियौं।'
'बिरामीसँग एउटै घरमा बस्दा पनि हामीलाई अहिलेसम्म कुनै परीक्षण भएको छैन। कसैले खोजखबर समेत गरेको छैन,' घरबेटीले सेतोपाटीसँग भने, 'आफैंले वडादेखि सांसद, मन्त्रालयको हटलाइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय गुहार्दा पनि चासो दिइएको छैन। प्रहरीलाई पनि खबर गरियो। कालिमाटी प्रहरी चौकी नै सिल गरिएको छ अरे, हाम्रो लागि को आउने।'
'यहाँ १० दिन बस्दा एउटै इनार, धारो, भर्‍याङ, गेट प्रयोग गर्‍यौं। बिरामीको सम्पर्क कहाँ-कहाँ भयो के थाहा? उहाँ आएदेखि कार्यालय पनि गइरहनुभएको थियो। हामी कसरी ढुक्क हुने,' उनले प्रश्न गरे, 'संक्रमितका श्रीमान यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई परामर्श चाहिएको छ।'
'संक्रमितका श्रीमानलाई किन घरैमा राखेको भनेर गनगन गरिरहेका छन्। कतिपयले गेट बाहिरबाट ताला लगाइदिऊँ कि जचाउन जान्छौ? समेत भन्दै धम्क्याउन थालेका छन्,' ९४ वर्षीय आमा र ४ वर्षे बालक लिएर कहाँ, कसरी जचाउन जाने उनले सोच्न सकेका छैनन्।
'जचाउने त हामी सबैले भनिरहेका छौं। अस्पताल जान सवारी छैन। फेरि कुनै सिफारिसबिना त्यसै गएर जाँच नहुने रहेछ। घरै आएर आरडिटी मात्रै गरिदिन माग छ,' उनी सुनाउँछन्, 'छिमेकीलाई दिनभरी स्पष्टिकरण दिनु परेको छ। संक्रमितका श्रीमानलाई नराख भन्छन्, अरुको कुरा सुन्नु कि आफ्नो बुद्धिले काम गर्नु?'
'संक्रमितसँगै बसेका श्रीमानलाई नेगेटिभ आउँदा अन्य व्यक्तिलाई परीक्षणको दोश्रो वर्गमा राखिएको होला,' वडाध्यक्षको भनाइ उद्दृत गर्दै घरबेटीले भने, 'संक्रमितको दोश्रो परीक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ देखिए मात्रै हामी सबैको पिसिआर परीक्षण हुने बताइएको छ।'
घरबेटी प्रश्न गर्छन्, 'यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको कति धेरै लापरवाही? दुई दिन बित्दा आरडिटीसमेत भएको छैन। बिरामी बहिनीको अर्को रिपोर्ट आउन पनि साता दिन लाग्नेछ। त्यति बेलासम्म हामी डरैडरमा बाँच्ने?'
भन्छन्, 'हामीले हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्‍यौं, सरकारले भने निर्वाह गरेन।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ८, २०७७, २०:४२:००